Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo ka tacsiyeeyay geeridii ku timid Xasan Abuukar Cali – Gool FM
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo ka tacsiyeeyay geeridii ku timid Xasan Abuukar Cali
jilacow February 20, 2018
(Muqdisho) 19 Feb 2018. Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid allaha u naxariistee taageerihii weynaa ee kooxda Horseed Xasan Abuukar Cali oo Muqdisho ku geeriyoodey.
Guddoomiye ku xigeenka Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubada Cagta Cali Cabdi Maxamed (Cali Shiine) ayaa sheegay in xiriirka ay ka tacsiyeenayaan geerida marxuum Xasan Abuukar oo ahaa shaqsigii bixiyay magaca Cawa iyo Maalin.
“Anigoo ku hadlaya magaca XSKC iyo kaygaba waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo saaxibadii uu ka geeriyooday taageerahii waynaa naadiga horsed, Xasan Abuukar Cali samir iyo iimaan alaha naga siiyo dhamanteen isagana alle qabrigisa ha u qaboojiyo.
Xasan Abuukar Cali waxa uu ahaa Allaha u naxariistee taageere caan ah oo ay lahayd kooxda Horseed waxa uuna ka mid ahaa shaqsiyaadkii ugu caansanaa dalkeena markii laga hadlo dhanka taageerayaasha.
Real Madrid oo helaysa Aqbaar xun ka hor lugta Labaad ee PSG
Garsooraha dhax dhaxaadin doona Chelsea iyo Barcelona oo lagu dhawaaqay....(Blues oo u bogsan)